के तपाईं क्लोनबाट सक्कली स्यामसंग ग्यालेक्सी एस6लाई भिन्न गर्न सक्नुहुन्छ? | Androidsis
पाब्लो अपारीसियो | | Samsung, एन्ड्रोइड धोखा दिन्छ
आजकल, वेब पृष्ठहरू र उपलब्ध अन्य स्टोरहरूको विकल्पहरूको मात्राको साथ, हामी जहिले पनि एक फेला पार्न सक्दछौं जुन हाम्रो फाइदा लिन चाहन्छ र एक गैर-मौलिक उपकरण लुक्न खोज्छ। त्यहाँ धेरै चिनियाँ प्रतिलिपिहरू छन् जुन बाहिरी भागमा एक वास्तविक उत्पादनको रूपमा देखा पर्दछ, तर विवरणले देखाउँदछ कि ती मूल जस्तै समान ध्यान दिएर बनेका थिएनन्। को सैमसंग ग्यालेक्सी S6 यो एक उपकरण हो जुन एकदम लोकप्रिय छ, र जसरी हामी यसलाई मनपर्दछौं, त्यस्तै जालसाजीहरू पनि गर्नुहोस्।
यद्यपि हामी सोच्दछौं कि हामी कहिल्यै बेवकूफ हुनेछैनौं, त्यहाँ धेरै राम्रा राम्रा प्रतिहरू बनाइएका छन् जसले कसैलाई पनि मूर्ख बनाउन सक्छ जब उनीहरूलाई सबै कुरा याद नगरेको समयमा पक्राउ गरियो। वास्तवमा, यी प्रतिलिपिहरू क्लोनहरू भनिन्छ, नॉक अफहरू होइन, किनभने क्लोन वास्तविक जत्तिकै उस्तै हो। वा राम्रो, लगभग। यस लेखमा हामी तपाईंलाई सबै साना गल्तीहरू देखाउनेछौं जुनaआकाशगंगा s6 क्लोन.
1 एक सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S6 र क्लोन बीच भिन्नता
2 के यो स्यामसंग ग्यालेक्सी S6 को क्लोन किन्न लायक छ?
3 जहाँ ग्यालेक्सी S6 को क्लोन किन्न
एक सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S6 र क्लोन बीच भिन्नता
निम्न पोइन्टहरूबाट, क्लोनसँग तिनीहरू मध्ये धेरै वा केवल एउटा हुन सक्छ। तार्किक रूपमा, निम्नका अधिक पोइन्टहरू हामीले उपकरणमा देख्छौं, हामी क्लोनलाई हेरफेर गर्न सक्ने बढी सम्भावना हुन्छ। हामी निम्न त्रुटिहरू फेला पार्न सक्छौं:
तार्किक रूपमा, सामसु like जस्ता कम्पनीले प्याकेजि inमा गल्ती गर्न सक्दैन। यदि हामीले बाकस खोल्छौं र सैमसंग ग्यालेक्सी S6 देख्दछौं भने बक्समा संकेत गरिएको भन्दा फरक र color्ग, हामीसँग क्लोन हुनु अघि% a% मौका छ।
बक्समा समावेश गरिएका सामानहरू पनि हेर्नु महत्त्वपूर्ण छ। उदाहरण को लागी, मूल हेडफोन सैमसंग हो र एक डिजाइन छ कि कान मा राम्रो फिट। को क्लोन हेडफोन सामान्य छन्जस्तै, हामी कुनै पनि कम-अन्तको फोनमा फेला पार्न सक्छौं।
मूल चार्जरसँगaछ शिलालेख द्रुत चार्जिंगको सन्दर्भमा (द्रुत शुल्क) क्लोन लोडरमा, यो शिलालेख हराइरहेको छ।
एकचोटि हामीले फोनलाई बाकसबाट बाहिर निकाल्छौं, हामीले उपकरणको निर्माण पनि हेर्नु पर्छ। यद्यपि हामी जहिले पनि S6 फेला पार्न सक्दछौं जुन राम्रोसँग माउन्ट गरिएको छैन, यो सामान्य हुनुहुन्न। यदि हामी बेजेल्स र टर्मिनलको अगाडि वा पछाडिको बीचमा हाम्रो हात पास गर्छौं भने हामीले महसुस गर्नुपर्दछ कि यो लगभग ब्लक हो। हो हामी केहि चरणहरु याद गर्दछौं धेरै स्पष्ट, जुन सिमको लागि ट्रेमा पनि लागू गर्न सकिन्छ, यस्तो सम्भावना हुन्छ कि हामीसँग जे छ हाम्रो हातमा क्लोन छ।
अर्को कुरा जुन हामीलाई भन्न सक्छ कि हामीसँग एउटा क्लोन छ त्यो हो फ्रन्ट क्यामेरा पूर्ण रूपमा केन्द्रित छैन यसको प्वालमा अघिल्लो बिन्दु जस्तै, यो सत्य हो कि ग्यालक्सी एस,, कुनै पनि अन्य उपकरण जस्तै, गलत हुन सक्छ र क्यामेरा केन्द्रित छैन, तर यो असम्ब्ली गल्ती हो जुन अवस्थित हुनुहुन्न। यदि हामीले देख्यौं कि फ्रन्ट क्यामेरा, रियर वा हृदय दर निगरानी केन्द्रित छैन, यो सम्भावना छ कि हामी क्लोन हेराफेरी गरिरहेका छौं। र यदि यी कुनै पनि कम्पोनेन्टहरू केन्द्रित छैनन् भने, हामीसँग पक्कै पनि क्लोन छ।
ग्यालक्सी एस of को अगाडि बटन दृढतापूर्वक ठीक गरिएको हुनुपर्दछ। यदि हामी सार्छौं भने बटनको माथि औंला र सार्नुहोस्हुनसक्छ हामीसँग क्लोन छ।
पछाडिको मार्कमा जहाँ यसले सामसUN्ग भन्छ (यदि यो गर्छ भने), क्लोनमा यसलाई वर्गाकारको रूपमा याद गर्न सकिन्छ जुन यसको वरिपरि छ। यस बक्सलाई हेर्दा हामीले प्राप्त गर्ने भावनाहरू मानौं मानौं उनीहरूले स्ट्रोकमा प्रभाव प्रदर्शन गर्न टिकट प्रयोग गरेका थिए। तार्किक रूपमा, एक मूल S6 मा ब्रान्ड उत्तम छ र यसको वरपर कुनै बक्स बिना।
मूल ग्यालक्सी S6 को उत्तम निर्माणले हामीलाई यसलाई राम्रोसँग सफा गर्न मद्दत गर्दछ। हामी सक्कली प्रयास नगरी कपडाको साथ मूल एस clean सफा गर्न सक्दछौं, हामीले शर्टलाई केहि गर्न सक्दछौं जुन हामीले कुनै खास समयमा लगाएका थियौं। एक क्लोन यसलाई सफा गर्न धेरै धेरै खर्च हुनेछ, जसले देखाउँदछ कि यसको सक्सन सक्कली जस्तो राम्रो छैन।
सामसु'sको निर्माणको पूर्णता जारी राख्दै, भर्चुअल बटन प्रकाश तलबाट यो केहि पूर्ण चित्रको मुनि देख्नुपर्दछ, जबकि क्लोनमा यो रेखाचित्रहरू छुट्याउन अझ गाह्रो हुन सक्छ।
सामसु्गले एक स्क्रीन माउन्ट गर्दछ AMOLED, त्यसैले यदि हामी उपकरण खोल्छौं र यसलाई झुकाउँछौं भने, स्क्रिन अझै कालो हुनेछ। क्लोनको एलडीसी स्क्रिनमा, जब यो खोल्छ र टिल्ट गर्दैछौं, हामी देख्नेछौं कि रंग यसको तीव्रता घट्छ र खैरो रंगको हुन्छ।
यदि हामी इग्निशन समयलाई S6 सँग तुलना गर्न सक्दछौं जुन हामीलाई थाहा छ मूल हो, यो क्लोन सुरु गर्न सँधै लिन्छ, जो सामान्य छ किनकि यसको हार्डवेयर धेरै विवेकपूर्ण छ।
साथै यदि हामी यसलाई सक्कली S6 सँग तुलना गर्न सक्छौं भने क्लोन स्क्रिनले धेरै कम परिभाषा देखाउँदछ।
मूल S6 को स्क्रीनको रिजोलुसन १1440० x २2560० छ, जबकि क्लोनको संकल्प मात्र आधा छ, x२० x १२720०। हामी यो अनुप्रयोगको साथ जाँच गर्न सक्दछौं जसले हामीलाई उपकरण डेटा देखाउँदछ।
यदि तपाईंको S6 छैन 4G वा LTE जडान, तपाईं क्लोनमा छ।
क्लोनको एन्ड्रोइड संस्करण कुनै पनि केसमा अन्तिम हुनेछैन, जबकि S6 सक्कलीले पहिले नै एन्ड्रोइड x.x प्रयोग गर्दछ.
El फिंगरप्रिन्ट सेन्सर क्लोनको यस्तो दुर्गुण छ कि हामी एक हातको फिंगरप्रिन्ट बचत गर्न सक्दछौं र अर्को हातको उहि औंलाले फोन अनलक गर्दछौं।
के यो स्यामसंग ग्यालेक्सी S6 को क्लोन किन्न लायक छ?
खैर, यो मिलियन डलर प्रश्न हो। यो सबै निर्भर गर्दछ, तर म जोखिम लिने छैन। यो स्पष्ट छ कि लगभग € १ for० को लागि हामीसँग एउटा उपकरण छ जुन ग्यालक्सी S150 जस्तो देखिन्छ, तर महत्त्वपूर्ण कुरा भित्र छ। प्रदर्शन धेरै कम छ र सामसु'sको टचविज नक्कल गर्न प्रयास गर्दै, अन्तराल हरेक समय उपस्थित हुनेछ।
अर्कोतर्फ, फोटो क्यामेरा योसँग अर्कोसँग समान मेगापिक्सल हुन सक्छ, तर मेगापिक्सेल केवल छवि आकार हुन्। महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको लेन्स र सफ्टवेयर (प्रसंस्करण) हो, र चिनियाँ प्रतिलिपिहरूमा यो विशेष गरी राम्रो कुरा होइन।
यदि समस्या पैसा हो भने, म एउटा खोज्न सिफारिस गर्दछु चिनियाँ फोन, तर प्रमुख ब्रान्डबाट Xiaomi, Huawei वा Lenovo जस्तै। यो केहि अधिक खर्च गर्न लायक हुन सक्छ, तर यो एक अधिक सुरक्षित शर्त हुनेछ। र यदि हामी भर्खरको मोडलको मूल्य के हो भनेर उठाउन सकेनौं भने हामी पुरानो बर्षबाट मोडेल खोज्न सक्छौं। यस तरीकाले हामीसँग सस्तो उपकरण, राम्रो ब्रान्डको र अझ महत्त्वपूर्ण देखिन्छ, समर्थनसहित।
जहाँ ग्यालेक्सी S6 को क्लोन किन्न
यदि हाम्रो चेतावनीको बाबजुद तपाईंले क्लोन किन्ने निर्णय गर्नु भएको छ र आश्चर्यको चाहनुहुन्न भने, म यो सिफारिस गर्दछु NO.1 S6I, जुन पृष्ठ 1949deal.com मा उपलब्ध छ। यो क्लोन "नेल गरिएको" मूल जस्तो छैन जुन हामी यूट्यूबमा देख्न सक्छौं, तर यसको विनिर्देशहरू र यसको € १२० को मूल्यले धेरै मिडियालाई यो बनाएको छ कि यो गत ग्यालेक्सी एस of को मितिमा बनेको सबैभन्दा राम्रो नक्कल हो। NO.120 S6I सँग छ:
प्रोसेसर: क्वाड कोर १.1.3GHz
अपरेटिङ सिस्टम: Android 5.0
र्याम मेमोरी: २ जीबी
भण्डारण मेमोरी: २ जीबी
स्क्रिन: .5.0.० इन्च HD IPS।
पर्दा रिजोल्युसन: १,२1.280० x .२०।
मुख्य कक्ष: १MP एमपी।
अगाडिको क्यामरा: १MP एमपी।
कनेक्टिविटी:, जी, वाइफाइ, जीपीएस, ब्लुटुथ।
ब्याट्री: २2800०० एमएएच
अन्य चश्मा: प्ले स्टोर, G- सेंसर।
NO.1 S6I खरीद गर्नुहोस्
के तपाईंले खरीद गर्नुभयो वा तपाईं सामसु Galaxy ग्यालेक्सी एस of को क्लोन किन्न योजना गर्दै हुनुहुन्छ? टिप्पणीहरूमा तपाइँको अनुभव छोड्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Samsung » के तपाईं क्लोनबाट सक्कली स्यामसंग ग्यालेक्सी एस6लाई छुट्याउन सक्नुहुन्छ?
हो, यदि मैले खाली वालेटमा भएका मानिसहरूलाई देख्छु, म जान्दछु यो वास्तविक S6 हो
मलाई पर्वाह छैन किनभने मलाई सामसु like मनपर्दैन!
रोलाण्ड मार्टिनेज भन्यो
तपाइँ तिनीहरूलाई मनपर्दैन, तर आउनुहोस्, कुन चासोको साथ तपाइँले लेख पढ्नुभयो।
रोलाण्ड मार्टिनेजलाई जवाफ दिनुहोस्
अलेक्ज्याण्डर स्टार भन्यो
भिडियो इटालियन भाषामा हो र लेख स्प्यानिशमा छ, त्यसैले उसले भिडियोमा के वर्णन गर्दछ भन्ने बारे मैले बुझेन।
एलेजेन्ड्रो एस्ट्रेलालाई जवाफ दिनुहोस्
स्क्रीन के परिणाम हेर्नका लागि आवेदन भनिन्छ?
Cpu z स्टोर मा उपलब्ध छ
काल्भोलाई जवाफ दिनुहोस्